February 08, 2017 – Shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta si weyn uga dhursugaya natiijada kasoo bixi doonta Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo iminka si habsami leh uga socota Xerada Ciidamada cirka (Afisiyoone) ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada labada Aqal ayaa maanta dooran doona Musharaxii ay u arkaan in uu hagi karo dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana inta badan Xildhibaanada lagu eedeenayaa in aysan Musharaxiinta u kala eegeyn waxqabad iyo fiicnaansho balse tooda gaarka ah, kii ay ka helaan lacag fiicanna codkooda siin doonaan.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u taageersan qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana si weyn looga dareemayaa Websiteyada Afka-Soomaaliga qora oo badankood qabtay doorashooyin cod uruurin ah.
Musharaxa ugu taageerada badan marka loo eego shacabka Soomaaliyeed, aadna u jeclaan lahaayeen in uu dalka Madaxweyne ka noqdo ayaa ah Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mxaamed C/Laahi Maxamed Farmaajo.
Qaar badan oo kamid ah Shacabka Soomaaliyeed ee iyagana ku nool dal iyo dibad ayaa iyana taageero weyn u haya, oo xilkana la doonaya in uu kusoo baxo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo mar kale u tartamaya in u dalka Madaxweyne ka noqdo.
Iyo Musharax Madaxweyne, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale isna heysta taageero badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada Baarlamaanka, waxa ayna taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh hal ku dhig u ah “qabyo qofkeeda dhameestira” iyagoo aaminsan hadii uu guuleesto in dalka horey u sii soconayo.
February 8, 2017 tuugahaladilo2015
Tirinta Codadka Doorashooyinka oo si Xawli ah ku Socda iyo Madaxweyne Kenyatta oo ku Horeeya August 9, 2017
Farmaajo oo Caawa Noqday Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya iyo Dabaaldegyo ka Socda Muqdisho (VIDEO) February 8, 2017
DEG-DEG: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku Dhawaaqay Inuu Tanaasulay (VIDEO) February 8, 2017